कसको पक्षमा कति मत छ भन्ने कुरा मतदानपछि थाहा हुन्छ: भीम रावल [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ सोमबार, मंसिर १३, २०७८, १८:३३
एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। सोमबार राति हुने मतदानमा उनका विपक्षी हुनेछन्, कपी शर्मा ओली। यतिबेला रावल प्रतिनिधिहरुसँग मत माग्न व्यस्त छन्। उनीसँग नेपाल लाइभका लागि बीपी अनमोलले गरको कुराकानीः
अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। तयारी कस्तो चल्दैछ?
मैले हाम्रा पार्टीका धेरैजसो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुसँग भेट गरिसकेको छु। मलाई मत दिनुस् भनेको छु। त्यो क्रम जारी छ।
नेतृत्वले तपाईंसँग कुरा गरेर केपी ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउन चाहेको भन्ने कुरा आइरहको थियो। केही प्रस्ताव आएको हो र?
त्यस्तो केही कुरा भएको छैन। त्यस्तो कुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि म देख्दिनँ। किनभने, अध्यक्षमा उम्मेदवारीको हिसाबमा म प्रष्टसँग अघि बढेको छु।
तपाईंको उम्मेदवारी लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्रै हो कि माधव नेपाल समूहको विरासतलाई अविच्छिन्न राख्ने प्रयास हो?
जब माधव कुमार नेपाल नै यो पार्टीबाट अलग भइसक्नुभयो भने उहाँको विरासतलाई यहाँ कायम राख्ने कुराको अर्थ छैन। मैले उम्मेदवारीको घोषणा गर्दा आफ्नो लक्ष्य र मान्यताहरु प्रष्ट पारिसकेको छु। मैले पार्टीलाई दृढतापूर्वक नेतृत्व दिएर राष्ट्रको सर्वोपरी हितमा केन्द्रित हुनको लागि उम्मेदवारी दिएको हो।
तपाईंलाई केपीले उम्मेदवारी फिर्ता लिन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि मान्नुभएन, तपाईं एकता प्रक्रियामा बाधक हुनुभयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ नि?
पूर्णतया गलत हो। पार्टी भित्रको निर्वाचनमा प्रतिनिधिहरुले चुन्ने र चुनिने अधिकार प्रयोग गर्ने हो। अध्यक्षमा निर्विरोध दोहोरिने ओलीको चाहना होला। मेरो पनि अध्यक्ष बन्ने चाहना छ। मैले पार्टीको विधि र पद्धतिअनुसार उम्मेदवारी दिएको हुँ।
तपाईंको उम्मेदवारी खास केका लागि, केपी ओलीको विरुद्ध हो वा अरु कही?
व्यक्ति विशेषका विरुद्ध होइन। उम्मेदवारी घोषणा गर्दा मैले आफ्ना जुन लक्ष्य र मान्यताहरु सार्वजनिक गरेको छु, त्यसमार्फत यो राष्ट्रलाई बलियो बनाउने र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुने हो।
तपाईंले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्न किन दिने भन्ने मान्यता अनुसार हो भनिन्छ नि?
मैले विधि पद्धतिअनुसार उम्मेदवारी दिएका हुँ। कसको पक्षमा कति मत छ भन्ने कुरा मतदानपछि मात्रै थाहा हुन्छ।
मत परिणामलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुहुन्छ?